Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe obusha kuvumela abalimi ukuba bavikele kangcono futhi balondoloze kahle imfuyo kanye nezilwane ezidliwayo. Ukusetshenziswa kwamathegi, amakhamera kanye nobuchwepheshe be-GPS, isibonelo, kungasetshenziswa ukulandelela nokugcina izilwane eziduni, ukuze kuqondwe kangcono ekuziphatheni kwabo futhi kusize abalimi benze izinqumo zokuphatha ngaphambi kwesikhathi. Emapulazini amakhulu kakhulu, abalimi abathile basebenzisa izidrones ukugcina ithrekhi yemfuyo kanye nokunyakaza kwezilwane.
Izinto Zagesi Ezivimbayo
Esikhundleni sokuphonsa indlovu yengonyama ekamu lakho ukuze ukwesabise izilwane ezikude, abalimi manje bangakwazi ukuthenga ukuvimbela ama-solar power powered, okufana ne-Skaapwagter, okhipha izinto ezingamane zicasule kuphela izilwane ezidla izidumbu kodwa futhi ziveza ama-ultra-high frequencies ezixosha izidumbu. Umsindo okhishwayo kuthiwa awuzwakala kalula kubantu nasezimvu, kodwa kubaluleke kakhulu izilwane ezidla inyamazane.
Lawa madivaysi aphumelela kakhulu ezimweni ezingenamimoya futhi akumele kubonakale njengesisombululo sodwa, kodwa ingxenye yendlela yokuphatha ephelele.
Izinto Ezivimbayo Ezijwayelekile
Esikhundleni sokuthenga izinto ezivuthayo zama-electronic, abalimi bangasebenzisa ama-radios ukuze bakhe imisindo ehlukene ezindaweni ezihlukahlukene, ukushintsha nokuwahambisa njalo ebusuku. Okufanayo kungenziwa ngezibani eziphuzile, eziluhlaza kanye nezibani ezimhlophe. I-Predation Management forum, iyala abalimi ukuba basebenzise lezi zithimba ngezikhathi eziyisithupha zamasonto ngekhefu lenyanga phakathi.
Amadivayisi aphunga akufanele asetshenziswe amasonto angaphezu kwengu-6, ukuvimbela izidakamizwa ukuba zisetshenziselwe iphunga futhi zishintshwe ngamadivaysi anomsindo nokukhanya. Izithonjana ze-ultrasonic akufanele zisetshenziswe amaviki angaphezu kwamahlanu ngesikhathi futhi, hhayi eduze kwama-owls noma ama-bhotela. Kufanele futhi ushintshwe nezinye imisindo.
Enye indlela yokulondla imfuyo ngokubavumela ukuba "bakufonele ngesikhathi besenkathazweni". Kunezixazululo eziningi eziye zavela kulo mqondo, ikakhulukazi ngendlela yekholomu ene-GPS Tracker exhunywe kuhlelo lokusebenza ocingweni lomlimi.
Ikholomu ifakwe kwenye yezilwane emhlambini. Ukulandelela lesi silwane esisodwa kuzonikeza umlimi lokho okushiwo yilowo nalowo umhlambi, ngoba izilwane zezinkomo ngokuvamile zihlanganisa ndawonye ngamaqembu. Ngokuvamile idivayisi ithumela i-SMS noma idala i-alamu, uma kwenzeka ukunyakaza okungavamile. Ngamanye amazwi, lapho isilwane sisebenza ngokuzumayo siqala ukusebenza ngaphandle kwesizathu esicacile. Ama-collars awasizi nje kuphela ukuphathwa kwezilwane, kodwa futhi iphumelela kakhulu ekusizeni ukuvimbela ukwebiwa kwe-stock. Abalimi bavame ukusebenzisa i-tracker kanye nabathrekhi bezintambo ezimbalwa ukuze badibanise ama-stock thieves.
Ama-collar evikelayo angasetshenziswa ezilwaneni ezisengozini kuze kube amasonto ayisithupha ukuwavikela eziduni ezibhekene nentamo. Ngaphandle kwalokho, ama-collars avimbelayo, okuyisibonelo amabellini, avela iphunga elimangalisa izibonisi noma izibani ezikhanyayo angasetshenziswa. I-collars isebenza kangcono uma ishintshaniswa omunye nomunye.
Ukufakwa Kocingo Kagesi
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha obuncingo kagesi kusho ukuthi abalimi akusadingeki bahambe ucingo lonke ukukhomba izinkinga. Esikhundleni salokho, manje sebexwayisiwe uma kusongelwa futhi banikezwa indawo ngqo yengozi. Ukuhlola njalo izicingo, kodwa, kubalulekile ukuthi lobu buchwepheshe busebenze kahle.